Hees iyo Qiso.
Saturday 9th January 2021 09:58:10 in Aragtida Dadweynaha by Madaxa Wararka
Sannadku waa 2016 kii. Bishu waa Nov ama waa xilli dayreed. Maalintu Salaasa iyo Arbaca kay ahayd ma xasuusto
oo labadaa maalmood midkood baan fanka ama heesaha muusigga leh u lahayn. Awalba annaga oo habsan ahayn buu roobkii dayrtu jidka nagu soo qooyay. Roobka dayrtu badanaa waxa uu da'aa habeenkii iyo galabtii. Soomaalidu waxay tidhaahdaa "dayrtu waa inan oo xidhood bay habeenkii u da'daa".
"Sida dhiraha midhaha le
Oo dhibici dayreed
Galabnimo kusoo dhacay".
Waagan aan idiinka sheekaynayo waxa aan ku jiray urur weli Burco ka dhisan oo Sidigmaal la yidhaahdo. Ururku waa uu waaxa badnaaye, waaxda qalinka iyo halabuurka ayaan guddoomiye ka ahaan jiray. Khasnaji ama maqal hayana waan ahaa. Xagga fanka nin Shiine la odhan jiray oo Hawd iska aaday baa Guddoomiye ka ahaan jiray. Maadaama oo aan fanka weligay si wayn u jeclaana, waaxdaa fankana anigaa la wareegay. Sidaas baan u ahaa ururka qofka ugu shaqada badan. Galabtaa qisada iyo heestuba kusocoto sida aan idiin soo sheegay habsan baa yara ahaa oo xubnihii xafiiskii ururka oo Caqaayadda [xaafadaha Burco mid ka mid ah] ku yaalay bay igu sugayeen. Aniga iyo asxaab kale oo qaar fanaaniintii heesaysay yihiin baa annaga oo qoyan guclo kusoo galnay gurigii aan maqsinka kaga jirnay ee xaruunta noo ahayd. Abaabul, kala fadhiisin iyo habayn ka dib waxa aan daaray sameecaddii [speaker] oo waxaan tijaabiyay ambarafaayar ama cod gudbiyihii [amplifier]. Waan xasuustaa oo sameecaddaa anaa gacantayda kusoo iibiyay. Lacagta sameecadda nalaga siiyay waxa ay ahayd $120. Waxa aan ka saaray lacag $150 oo aan ka qaadnay reer aroos ahaa oo aan habeenadaa usoo ciyaarnay. Furitaan ka dib hadba fanaan baan soo kicinayay oo hees noogu luuqaynayay. Fanaaniintu waxa ay qaadayeen heeso fanaaniin hore lahayd oo ay Karaoke ahaan u qaadayeen. Heesahan oo music-gu gaar yahay oo laga reebay codkii fanaanka ayaad YouTube-ka kala soo degaysaa. Heesaha badanaa waxaa ku qoran tijaabi codkaaga. Fanaaniinta galabtan noo heesaysa oo aad u badnaa midbana mid ka cod macaanaa waxa aan ka tilmaami karaa
Maxamuud oo music ku qaadaya heestii "dawadii naftaydaay, dadka taan kaa doortaay" , Maxamed Siciid Maxamed Xuseen [Asmar] oo ahaa fanaan aan codkiisa cid gaadhaa Soomaali ku yar tahay oo qaadayay heestii Axmed Biif ee "Barnidaan jeclaadayee, igu beertay caashaqa".
Hadba waxa uu fanaan heeso oo cod hallaasi ah nagu jalbeebiyo, waxaa masraxu isu rogay talantaali oo hablo iyo wiilal baa labo labo u heesay. Goor aanay gabagabadii wax badan ba ka hadhin ayaa waxaa hal mar la wareegay heestii oo aan madasha kusoo dhaweeyay saaxiibkay
iyo inan [magaceeda inaan sheego waa laga cudur daartay] jacayl wayn oo cid weliba ogayd ka dhaxeeyay. Anigu labadan shakhsi dadka waan uga sii dhawaa oo haasaawahooda war wayn baan u hayaa. Kun habeen baan saaxiibkay u raacayba iyaga oo kulmaya.
Jacaylkoodu wuxuu gaadhay heer uu bislaaday oo keliya ay u hadhsantahay in uu midha dhalo oo qoyskani hoy wada degaan. Nasiib se ma odhan doono! Roobkii bilawgii jidka nagu soo helay weli wuu da'ayaa oo udgoonka, carafta iyo laydha dhacaysa ayaaba jacayl aanad garanayn qof uu kuu hayo ku gelinaysa, waaba labadan qof ee aynu kasoo sheekaynay ee. Suugaanyahanka iyo heesaagu markooda horeba dadka uga nugul jacaylka ee labadan lamaane fanaanimo caashaqa carinaysa ayay mar walba dadka dheeryihiin. Shib! Hal mar baa lawada aamusay oo iyagii uun la sugay waxa ay qaadi doonaan. Bluetooth-ka ayay ku xidhiidhsadeen sameecaddii oo ay daarteen heesta ay wadar ahaan markooda u qaadayaan. Waxa ay ku wada fadhiyaan hal kursi oo qudha oo cid saddexaysaa uma dhawa. Xishood bay dhexdooda ka dareemayaan, xoogaa qajilaad ahina indhahan badan ee fahamsan ee soo eegaya ayay ka haysata. Music-gii baa bilaabmay. Saw heestay qaadayaanba waa heestii Magoole iyo Xasan Bayle [Taajir Cabeeb] ee dhabtuu jacaylku yaalaa. Hal mar baa sidii wax wada qoyay dadkii jacayl lawada foorarsadeen oo meeshiiba qiiro isu badashay. Wuxuunbaa mar qudha lasoo wada baraarugay markay inantii luuqdeediu macaanayd matinaysay
Hal mar baan wada xasuusanay in naxariistan caashaq ee aan ku dhex jirnaa noo dheertahay naxariistii illaahay oo hogoli na hayso. Yaa jannadaa iskaga jira baa qof kastaa maanka ka lahaa, se lama maqlayn. Heesihii hore waa layska jaasayay, waa layska ciyaarayay ee tan qofna ma kicin, iyagna xataa isma eegayaan badiyaaba oo "indho jacayl isma eegi karaan" baa Soomaali laga hayay. Markii ay heestii dhameeyeen ee labadii baydba nagu dul akhriyeen baan hal mar la soo wada boodnay "noo biisa noo biisa". Siday galabtii noogu celcelinayeen bay salaaddii makhrib nagaga tagtay. Illaa 8 jeer way noogu celiyeen. Markii dambe xoogaa waabay is eegi karayeen oo annana daymadooda kalgacal kaleh baannu ku diirsanayay, se wax intaa dheer oo dhalinyaro warkeed ah wayka dhago adaygeen. Waxaaban ku xasuustay meerisyadii Hadraawi ee ku jiray maansadii Jacayl dhiig malagu qoray ee ahaa
"Iyagoon ka dheeraan
Isha mayska dhawreen"
Markasta oo aan heestan dhagaysto ama aan galo muudhka iyo mawjadaha jacaylkaba waan xasuustaa maalintan. Noloshay nasiib uma helin xasuus jacayl oo sidaa u qurux badan.
Inkasta oo uu dhamaaday waayaha jacaylka illaa heerkaa qurux badnaa, haddana waa xasuus aan maankayaga ka bixin. Hay waydiinina sababta uu jacaylkaasu usoo gabagaboobay. Waxse keliya aan idiin sheegayaa badanaa jacaylada dhabta ahi ma guulaystaan ee waxba dhab haw jeclaanina.
Waayadaa waxa aan aad ugu taami jiray in aan ka sameeyo magaalada Burco koox faneed la tartanta kooxda Xiddigaha Geeska oo markaa ahayd kooxda ugu magaca iyo maamuuska wayn geyiga Soomaalida. Hooballo iyo halabuur tayo badan oo cid walba aan kula tartami karayo waan hayay, balse duruufo badan oo magaalka ka jiray baa saamixi waayay. Dhaqaale la'aan, muusigaystayaal la'aan iyo magaalada oo aan fan ba u doyaarsanayn oo wadaadu xoog badan ku leeyihiin. Hammigaasi berigaa wuu saqiiray, se maanta kumaba hammiyeen.
Waatan heestii oo dhamaystiran. Akhris wanaagsan.
Sida aad dhalaan tahay
Oo aan ku dhalay
Dadka kaa dhawaystee
Dhinacyada xubnaha iyo
Dhammow igaga yaalaa
Dhabtuu jacaylku yaalaa
Sida dhiraha midhaha le
Galabnimo kusoo dhacay
Oo dharabtiyo malabkuna
Dhirta dacalka saareen
Aan kuu dhaweeyoo
Marna aanbku dheehdee
Adiguna ha dheeraan
Illaah baa dheg iyo qurux
Intu kuu dhameeyaaad
Hablo taako dheertahee
Waxa gala dhaqmaatiga
Ifka dheeman iyo luul
Lagu dhaafsan maayee
Dhexda taaka iyo socod
Ama dhabarka geenyada
Sida damal dhulkays wadhay
Timahaagan kala dhacay
Waa waxa i dhaawacay
W/Q Caydaruus Shacraawi.
[DEG DEG:-] Fanaanaddii Maayarka Hargeysa Heesta U Qaaday Oo Iminka Reer Hargeysa Ka Xaal Marisay
Dawlada Sudan Oo Si Buuxda Ula Wareegtay Dhul Ay Ka Heesatay Itoobiya iyo xiisad taagan
Qisada Ay Ku Timid Heesta 'Suleekhaay Aragaagu':- Cajiib.
[DAAWO:- ] Heesta Cusub Ee Fanaan Karaar Xareed Daawaha Ka Soo Qaaday ['' Meel Aan Reeraha Loo Abtirineyn'&#
[DEG DEG:-] Fanaankii Hore Ee Maxamed Bk Oo Dadka Soomaalida Ah U Caddeeyay Inuu Ku Noqonayo Fankii iyo Heesihii [LIVE]
"Beeshu Musharax Ay Ku Heeshiisay Ma Jiro" Odayaasha Gobolka Hawd Oo Afka U Furtay Xaalada Xildhibaano U Shara
Goobaha Caweysyada Ee Laga Qaado Heesaha Qaraamiga Ah Oo Ku Soo Badanaya Hargeysa [ Muuqaal ]